Dingana 3 hiarovana ny bilaoginao amin'ny fitoriana goavambe sy matavy | Martech Zone
Asabotsy, Aogositra 16, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Androany no andro voalohany an'ny BlogINDIANA ary nahafinaritra izany. Nanao be dia be aho twitter avy amin'ilay hetsika, ary nihazakazaka fahana mivantana aza nandritra ny fotoana kelikely.
Ny fivoriana voalohany natrehiko dia tena nanaitra ahy, teo amin'ny lafiny ara-dalàna amin'ny fanaovana bilaogy izany. Tsy ny mpisolovava no nitantana ny fivoriana fa ny bilaogera iray, Andrew Paradies, izay tena nanamarika ny pitsopitson'ny lalàna mifandraika amin'ny fanaovana bilaogy. Tena nahasarika tokoa ity lohahevitra ity ka avy hatrany dia nanitsy ny diariko aho ary nanampy Fanambarana ho an'ny pejin'ny Terms of Service ahy.
1. Manampia Disclaimer ao amin'ny bilaoginao miaraka amina rohy ao amin'ny Footer
Ny angona rehetra sy ny fampahalalana omena eto amin'ity tranonkala ity dia ho fampahalalana fotsiny. Martech Zone Tsy misy ny fanehoana ny marina, ny fahafenoana, ny zava-misy ankehitriny, ny mety, na ny maha-marina ny vaovao rehetra amin'ity tranokala ity ary tsy tompon'andraikitra amin'ny hadisoana, fanesorana, na fahatarana amin'ity fampahalalana ity na fatiantoka, ratra, na fahasimbana nateraky ny fampisehoana azy na ampiasaina. Ny fampahalalana rehetra dia omena araka ny tokony ho izy.
Mampahafantatra ny olona ny fanesorana fa ny vaovao hitany ato amin'ity bilaogy ity dia natao horaisina ho hevitra fa tsy tena zava-misy. Na dia miharihary aza io seza io, ara-dalàna io dia tsy raha tsy hoe manambara azy ianao! Mametraha disclaimer ao amin'ny bilaoginao anio. Ataovy izao! Aza miandry.
Aleo misy a disclaimer fa tsy mety a $ 20 tapitrisa fitoriana.
2. Manomboha orinasa manana andraikitra voafetra ho an'ny bilaoginao
Ho fanampin'izay, napetrako koa ny bilaogiko ambany ny orinasako manana andraikitra voafetra (Llc). Mametraka ny Blog eo ambanin'ny Llc-ko, DK New Media mametraka ny bilaogiko eo ambanin'ny elo'ny orinasako (izany dia hatramin'ny nanombohako ny Llc - saingy tsy niraharaha nilaza izany tamin'ny fanoratana tao amin'ny dian'ny bilaogiko aho).
Tsy mila manahy momba ny atiny ateraky ny mpampiasa ianao toy ny fanehoan-kevitra - izany arovan'ny andininy 230 amin'ny fanitsiana voalohany.
3. Tohano ny Electronic Frontier Foundation
Azoko ampiana fa ny zavatra fahatelo azonao atao hiarovana ankolaka ny tenanao dia ny fisoratana anarana na fanomezana ho an'ny Electronic Frontier Foundation.
Io no hany fikambanana mijery sy miady amin'ny zon'ny bilaogera sy ny fahalalahany.
Tags: bilaogyfitorahana bilaogyfitorianamiaro
Aug 17, 2008 amin'ny 9: 09 AM
Nandresy lahatra ahy tamin'ny farany ny dingana voalohany.
Ao amin'ny Terms of Service anao dia misy lesoka kely amin'ny tsipelina roa. Azonao atao koa ny mampiditra zavatra roa hafa:
1.) An'ny tompony avy ny mari-barotra
2.) Tsy tompon'andraikitra amin'ny atiny izay ampifandraisinao ianao.
media sosialy jay
23 Jun 2009 amin'ny 2:33 AM
Tena manampy izany. Manana bilaogy efa 3 taona aho ary tsy mametraka disclaimer na zavatra velively.
Jul 24, 2011 amin'ny 12: 47 AM
Misaotra Douglas, manao an'izany eo noho eo aho, misaotra koa Martin, mba hamoaka ilay olana momba ny marika.